Himalaya Dainik » गधाको पनि विवाह !
गधाको पनि विवाह !
सुन्दा अनौठो लाग्ने तर सत्य घटना फेरी एकचोटी दोहोरिएको छ। लामो समय वर्षा नभएपछि वर्षाका लागि केही सप्ताह पहिले भ्यागुत्ताको विवाह गरिएको थियो । सो घटना भएको बीचमा पानीका लागि गधाको पनि विवाह भएको खुल्न आएको छ । भारतको तेलंगाना राज्यमा पर्ने बोवनपल्लीस्थित नल्ला पोचम्मा मन्दिरमा हालै हिन्दु रितिरिवाज अनुसार एक जोडी गधाको बिहे गराइएको छ। पहिले ब्याण्ड बाजा अनि फेरि आतिशबाजीसँगै गधाको एक जोडीको बिहे सम्पन्न गरिएको छ । वास्तवमा तेलंगानामा मानिसहरु कमजोर मनसूनका अनावृष्टिसँग जुधिरहेका छन् ।
त्यसैले वर्षातको कामना गर्दै उनीहरुले यस्ता यस्ता अनुष्ठानहरु गर्ने गरेका छन् । गधाको बिहे गरिदिएपछि जलदेवता खुसी हुने र भारी वर्षा हुने विश्वास त्यहाँका मानिसहरुमा छ । चार वर्ष पहिले पनि त्यहाँ गधाको बिहेपछि पानी परेको थियो । यो पटक पनि गधाको बिहेले वर्षा हुने विश्वास उनीहरुमा छ । गाउँलेहरुका अनुसार द्धावापर युगमा कृष्ण भगवानका पिताले समस्याबाट पार पाउनका लागि गधाको पाउ छोएका थिए । सोही किम्बदन्तीका आधारमा गधाको पाउ छोएर कन्यादान गरेमा शुभ हुने र समस्या हट्ने आमविश्वास रहेको छ।
प्रकाशित मिति १२ श्रावण २०७६, आईतवार १०:५०